Plekhanov Ruush University of Economics - Study in Russia
Plekhanov Ruush University of Economics
Plekhanov Ruush University of Economics Details
gaabinta : Rea
Ha iloobin in aad wada hadlaan Plekhanov Ruush University of Economics
Qorto Plekhanov Ruush University of Economics
Our Mission: hoggaanka in xirfadlayaasha tababarka oo dhan hareeraheeda ku-view berrinkii dhaqaalaha, ku salaysan ereygu wuxuu ahaa ee dhaqan taariikheed, tabo cusub sayniska iyo horumarinta guul iyo waara ee jaamacadda;Hawlgalka of Plekhanov Ruush University of Economics ka kooban yahay ee:
horumarinta iyo waxbarashada oo fidsan dhaqaalaha iyo ganacsiga dhaqmo ku salaysan isku darka dhaxalka taariikheed iyo dhaqan ganacsi sida qiimaha bulshada ee ugu muhiimsan;
waxbarista shaqsiyaadka bartay oo aqoon leh, kuwaas oo ay awoodaan si ay u noqdaan hoggaamiyeyaasha ee dhaqaalaha caalamiga ah.
Plekhanov Ruush University of Economics waa hay'ad la aqoonsan yahay Dawladda ruqsad si ay u bixiyaan tacliinta sare iyo adeegyada waxbarasho oo dheeraad ah. Status of “University” ka dhigan tahay in hay'ad ee sare (undergraduate & graduate) iyo waxbarashada post-graduate waa qof ku taqasustay beer gaar ah – dhaqaalaha & Management. University waa hay'adda ugu weyn ee dhaqaalaha waxbarasho ee Russia iyo Midowgii Soofiyeeti ee hore. Waxay ka kooban tahay Caqlina socda: dhaqaalaha Guud; Xiriirka Business International; International Business School (IBS- Plekhanov); Maaliyadda, Accounting iyo Banking; Dhaqaalaha iyo Maamulka; Siyaasadda Taxation; Engineering Commercial; Maamulka Business; Cybernetics dhaqaalaha; iibinaya; Dhaqaalaha ee Enterprises; Studies Siyaasadda iyo Sharciga; Kuliyada Business iyo MBA School.
University Plekhanov bixisaa nidaamka labada heer ah waxbarashada dhaqaalaha iyo ganacsiga. Heerka ugu horeysay – afar sanno ah wakhti buuxa Barnaamijka Degree Bachelor horrayn ujeedadiisu at gudbinta aqoonta kala duwan ee asaaska dhaqaalaha iyo cilmiga ganacsiga. Heerka labaad – laba sano Barnaamijka Degree Master waqti-buuxa ah – ardayda sii korodhsan doonaa xirfadeed oo diiradda si dhow garoonka ay doorteen.
qalin Our waa dad dhallinyaro ah oo awood ku hawlan oo dhan dhinacyada kala duwan ee warshadaha ee qaranka, dhaqaalaha iyo ganacsiga. Marka laga reebo kuwa ardayda dooran in ay tagaan on waxbarasho dheeraad ah, Heerka shaqo ee ka qalin-ka ay aad u sarayso.
Waxaan aad ugu faraxsanahay in dad badan oo ka mid ah aqoonyahaniinta ugu caansan, dhaqaaleyahannada, madaxda siyaasadda iyo ganacsiga, diblomaasiyiinta iyo xirfadlayaal kale oo hadda firfircoon ee dhaqaalaha Ruush cusub yihiin Plekhanov tababaran.
Waxa kale oo aanu si gaar ah ugu han xaqiiqda ah in shahaadada Plekhanov waxaa shahaado by UNESCO.
Waxaan isku dayaan in ay abuuraan oo dhan shuruudaha heerka ugu sareeya ee waxbarasho oo ay ku jirto fursad ay ku bartaan keentay Western Jaamacadaha inta lagu guda jiro waxbarasho tacliinta dibadda. Waxaan rabnaa in aan ka mid ah ardayda qalin jabisa runtii xirfad u leeyihiin, dadka waxbarashada sare leh iyo caqli.
Kuliyada Xisaabeed dhaqaalaha iyo Statistics
Kuliyada Trading Dhaqaalaha
Kuliyada Hotel, Restaurant, Dalxiiska iyo Sport Industry
Kuliyada dheeraad ah Waxbarashada Professional
Main Dhismaha Jaamacadda
Kulliyadda Dhaqaalaha Guud
Dugsiga oo qayb ka mid ah Business
Business School of Marketing iyo Ganacsi
Kuliyada Applied Baccalaureate
Kuliyada Waxbarashada Distance
Kuliyada Electronic Waxbarashada
Plekhanov Ruush University of Economics leeyahay 107 taariikhda sanadka oo ay xidhiidh dhow la qaybaha ganacsiga iyo warshadaha ee Russia.
baahan yahay si ay u tababaraan shaqaalaha xirfadda - maareeyayaasha, dhaqaaleyahannada, injineerada ganacsi - ula yimaadeen koritaanka jabsaday qoorta of warshadaha iyo dhaqaalaha ee Empire Ruush ah bilowga 20th century.At in goor Moscow bulshada kororka waxbarashada ganacsiga dalkii on deeq ka iibsanayay Zamoskvorechye dhismaha kulliyadda ganacsiga ee ragga.
kulliyadda ganacsiga ee ragga waxaa la aasaasay by ganacsade Ruush iyo philanthropistAlexey Vishnyakov in 1901. Markii hore kulliyadda waxaa ku yaala dhismayaal alwaax. In xilliga dayrta 1903 dhismaha cusub ee jaamacadda ka dhisay on design ka mid ah naqshada caanka AlexanderZelenko albaabka u furay. In 1904 kulliyadda ganacsiga ee ragga waxaa si sharaf leh loo magacaabay ka dib markii Tsesarevich Alexey.
Sannad ka dib dhow kulliyadda waayo, nimankii Society furay kulliyadda ganacsiga ee dumar la cibaadaysiga ah aawadood icon Hooyo Ilaah "Recovery oo ka mid ah ku dhaceen". Isla mar ahaantaana koorsooyinka tababarka macallimiinta, waayo, kulliyadaha, kuwaas oo la soo abaabulay. by 1907 koorsooyin la koray heerka dugsiga sare si buuxda u xoogan oo ay edeb ku galay Moscow machadka ganacsi. Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha ee Ruush Empire saxiixday document ku habboon on February 19, 1907 iyo taariikhda this waxaa loo arkaa taariikhda aasaaska dugsiga ugu horeysay ee Russian sare ee dhaqaalaha.
In 1911 dhismaha dhismaha machadka bilaabay. Hoogay, kaliya markeeda ugu horeysay ee la taagay, Dagaalkii koowaad ee aduunka hortagi dhismaha dheeraad ah. Intii lagu guda jiray dagaalka ka badan 2000 ardayda diriray ayay ka shaqeeyeen battlefront, iyo isbitaalka askari oo ku dhaawacmay abaabulay in dhismaha dugsiga ganacsiga haweenka.
In 1919 Machadka noqday gobolka iyo magacayga aawadiis Moscow Institute of Dhaqaalaha Qaranka bedelay. Markii hore waxaa la odhan jiray ka dib markii Karl Marx, oo keliya in 1924 machadka la siiyey magaca GeorgiPlehanov Faylasuuf -Russian iyo theoretician Markis qudbad.
In ka sano ee hore ee dowladda Soviet machadka ku dhibtooday inuu jiritaankeeda - waxaa jiray yaraanta shidaalka, cuntada; ma jirin mushahar macalimiinta wakhtiga fowdo. Machadka, si kastaba ha ahaatee, ku guulaysteen in ay dhex maraan xilliga adag oo haddana horumar.
The 40th keenay dalka dhibtani daran - dagaalkii labaad ee dunida. Intii lagu guda jiray dagaalka boqolaal ardayda iyo shaqaalaha ka shaqeeya ee Moscow Institute of Dhaqaalaha Qaranka tagay battlefront oo intooda badan waxay ahaayeen dad mutadawiciin ah. Inta badan oo iyaga ka mid dagaalamay 17th Saaka iyo iskaa wax u qabso ee degdegga ah ee dadka, koobnayd oo dhan "shirkadaha ka mid ah shaqaalaha Plekhanov".
sano dagaal Post ahaayeen wakhtiga Institute Moscow ee Dhaqaalaha Qaranka barwaaqo. Machadka noqday dugsiga ugu weyn sare ee profile dhaqaale ee Soviet Russia. The dib-u-qalabka firfircoon oo saldhig cilmiyeed iyo farsamo la sameeyay iyo baaritaan dhaqaale horusocod iyo sidoo. In 1970-80 dhismaha waxbarashada cusub, xarunta dhaqanka, kuleejo ah ayaa la dhisay. Inta lagu guda jiro ciyaaraha Olympic ee Moscow 1980 ee Isboorti ee shisheeye ku noolaa Institute'sdormitory ah.
In 1991 ka dhanka ah asalka ah oo ah isbedel bulsho iyo siyaasadeed ee RussiaMoscow Institute of Dhaqaalaha Qaranka badalin magaca oo waxay noqdeen Plekhanov Ruush Academy of Economics. academy ayaa sinna sida waqtiga, aan ka danbeeya dhabta ah si degdeg ah la beddelo nolosha dhaqaale Ruush.
Plekhanov Ruush Academy of Economics ayaa la kulmay qarnigii XXI la wareeg cusub oo horumarineed - habeynta geedi socodka waxbarashada, meelaha cusub ee tababarka, iyo shaqooyinka weyn dayactirka iyo dhismaha. In 2010 academy waxaa la guddoonsiiyey xaaladda sare ee Jaamacadda.
Ka dib markii qarni ah kan ugu horreeyey iyo dhismayaasha taariikhiga ah ee labaad ee Jaamacadda waxaa lagu soo bandhigay ina hor in ay tahay muuqashada hore. dib u soo celinta ee dhismayaasha taariikhiga ah ee University waxaa laga sameeyey, muuqashadii hore cusboonaatay. Waxaa aad muhiim u ahayd si loo badbaadiyo gudaha taariikhiga ah ee dhismaha, xaqiiq tahay of muuqaalka. Magaaladu waxay noqon kartaa faani taxadiri soo celiyey ee naqshadda dhismaha ee bilowgii qarnigii XX iyo ardayda iyo shaqaalaha ku raaxaysan karaan waxbarashada iyo ka shaqeeyaan dhismayaasha waxbarasho qurux badan iyo raaxo.
Maanta Plekhanov Ruush University of Economics waa brand waxbarashada iyo sayniska la garan karo iyo sumcad. Meelood oo kun oo ka qalin jaamacad ku shaqeeyaan si guul leh ee Russia iyo dibadda iyo Badankoodna waa faanka nolosha dhaqaale Ruush.
Ma rabtaa wada hadlaan Plekhanov Ruush University of Economics ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Plekhanov Ruush University of Economics on Map
Photos: Plekhanov Ruush University of Economics rasmiga ah Facebook
Plekhanov Ruush University of dib u eegista dhaqaalaha
Ku biir si ay ugala hadlaan of Plekhanov Ruush University of Economics.